China Vinyl/Neoprene Dumbbells ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya Meiao
Ịgbakwunye nkwụsịtụ dị nro n'ime mgbatị ahụ gị nwere ike ịbawanye abụba na ọkụ. Nke a dumbbell bụ enyi na enyi, nchekwa na ntụsara ahụ, ejiri obere aka mee ya na ebughị n'uche. Site na iji ihe mkpuchi vinyl /neoprene dị nro, dumbbells ndị a bụ nhọrọ dị mma maka ndị ọhụrụ na -ebuli ibu ma ọ bụ onye ọ bụla chọrọ ịgbakwunye nguzogide ọkụ na ọzụzụ ha. Yabụ dumbbell a dabara adaba maka ụmụ nwanyị na ụmụaka.
Banyere nkọwapụta, anyị nwere kilogram: 0.5kg, 1kg, 1.5kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg
Anyị na -emekwa pound, anyị nwere 2lb, 3lb, 4lb, 5lb, 6lb, 7lb, 8lb, 9lb, 10lb, 12lb, 15lb.
Agba dịkwa iche iche mara mma nke ukwuu. Agba anyị na -acha mgbe niile bụ ọbara ọbara, pink, odo odo, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ......
I nwekwara ike hazie LOGO nke gị na dumbbells.
N'ihi ọdịdị ngwụcha ngwụcha ha, Vinyl/ Neoprene Dumbbells anaghị atụgharị mgbe etinyere ya n'ala.
Isi mkpuchi vinyl / neoprene na-amachi akwa na akwa na dumbbells na-eme ka ha dịgide ma hichaa ya.
Ihe mkpuchi ahụ na -eme ka dumbbells dị jụụ mgbe etinyere ya na ala na -enyere aka belata mkpọtụ na ichebe elu mgbatị ahụ gị.
Ngwugwu ： Ihe nkiri plastik kpuchie elu ngwaahịa a, tinye katọn wee jiri pallet
Ezigbo mma, kewara gị iche
1. Dingzhou Meiao Bubata na mbupụ ahịa Co., Ltd. nwere ikike nrụpụta dị mma, nke nwere ike ịnapụta ngwaahịa kachasị ewu ewu n'ime ụbọchị 3-30.Enwere ike nyefee dumbbells kacha ewu ewu n'ime ụbọchị 30 na-enweghị nhazi oge. Ma nwee ike ikwe nkwa ịdịmma ngwaahịa yana ọrụ ndị ahịa kacha mma.
2. Anyị nwere ngwaahịa zuru oke maka ndị ahịa ịhọrọ, nke dabara adaba maka ndị ahịa imepụta agbụ ụlọ ọrụ dum maka nkwalite, anyị ga -enyekwa ndụmọdụ ịzụta inyeaka dịka ọwa ahịa ndị ahịa na ọnọdụ ahịa si dị.
3, Anyị na -akwado ngwaahịa ahaziri iche, ọ bụrụhaala na ịchọrọ, anyị nwere ike nweta ya. Ọrụ kacha mma bụ mgbe niile nkà ihe ọmụma anyị
Nke gara aga: Mgbịrịgba kettle Jinsu
Osote: Meiao Fitness black cast iron kettle mgbịrịgba SET
N'ogbe ọnụ ala weightlifting àgwà ciment du ...
China Omenala yi siri ike Nkedo ígwè Vinyl Ket ...
Ọkachamma 20kg mgbatị mgbatị dumbbell setịpụrụ mgbatị ahụ ...
High ina ngwaahịa N'ogbe vinyl 10kg fitne ...
2021 Hot ere ngwaahịa mgbanwe abụọ mpempe ...
New mbata ngwaahịa ketulu swiiti agba zuru ezu ...